हसिँया लागेर भागेका नवराजका साथी भन्छन् ‘नभागेको भए हामी सबैलाई मा’र्ने रहेछन्’ (भिडियोसहित)
June 1, 2020 3714
नवराजसंगै रुकुम गएका केही युवाहरुले घटना’का बारेमा नयाँ कुरा खुलाएका छन् । उनीहरुले आफुहरु १९ जनाको समुहमा गएको स्वीकार गरेका छन् । आफुहरु फर्क’न लागेको बेलामा गाउँका ठुलो भि’ड आएको देखेर आफुहरु ड’राएर भागेको बयान दिएका छन् ।
सो घटनामा बाँचेर फर्कीएकाहरुले आफुह’रुलाई आ क्र म ण भएको बताएका छन् । भेरीको पुल नाघेर बाँचेका दुई जना नवराजका साथीहरुले आफुहरु भागेर बाँचेप”छि उनीहरु पनि भा’गे होलान् भन्ने ठाने’को बताए ।
२१ वर्षका नवराज विक, १७ वर्षकी युवतीसंग प्रेम सम्बन्धमा थिए । नवराजले गएको श’निवार वेहुली लिन भन्दै अन्य १८ जना साथी लिएर गएका थिए । नवराजले आफुहरुलाई वेहु’ली भगाउन जाने भनेर फोन गरेपछि आफुहरु गाउँवा १० जना गएको बताए ।
वाटोमा अरु साथीहरु मिसि’एर १९ जना भएर युवतीको गाउँ गएको बताए । उनीह’रु युवतीको घर नजिकैको वाटोवाट जाँदाखेरी युवतीको आमाले देखेपछि, ए डुम तँ फेरी आइस् भन्दै भनेको उनीह’रुले बताएका छन् ।
नवराजलाई युव’तीको आमाले पहिल्यै देखि चिने’को हुनसक्ने भएकाले देख्ने बि’त्तिकै त्यस्तो भनेको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुको कुरा भएको थियो की के हो त्यो त थाहा भएन, संगै गएका एक जना साथीले भने, हामीलाई देख्ने बित्तिकै युव’तीको आमाले ए डुँम त फेरी आइस् ? भनेर भन्नुभयो ।
पहिलाको चोट खाएर पुगेन ? अब म रेर जान्छन् । आमाले त्यसो भनेपछि आफुहरु फर्केर घर फर्कन लागेप’छि मथिवाट ठूलो हुल आएर आफुहरु माथि आ क्र म ण भएको ब’ताए ।
ढुंगा, मुढा, हँसिया’ले हानेको उनीहरुले बताएका छन् । हँसियाको पछा’डीको भागले आफुहरुलाई हानेको उनले बताए । त्यस्तो बेलामा को कता भाग्यो थाहा नै भएन । सबैजना भा’ग्न तिर लाग्यो । हामीले उनीहरु पनि भागे होलान् भन्ने लाग्यो उनले भने । आफुहरु’लाई देख्ने बित्तीकै युवतीको आमाले अध्यक्षला’ई फोन गर्न भनेको पनि आफुहरुले सुनेको बताए ।
युवतीको आमाले वडाध्यक्षलाई फोन गरेर २, ३ गाडी मगा भनेर भनेको आफुहरुले सुनेको बताए । लकडाउ’नको बेलामा किन नवराजले यस्तो कनि डिसि’जन गर्यो भन्ने आफुलाई थाहा नभएको बताए । करिब तीन वर्ष देखि उनीहरुको बिचमा प्रेम रहेको भन्ने कुरा आफुहरुलाई थाहा भएको बताए । एस’इइ दिने बेलामा पनि नवराज युवती’को कोठामा गएर बसेको उनीहरुको भनाई छ ।
गाउँलेले हानिरहेकै बेलामा २ जना प्रहरी आएर आफुह’रुलाई बचाएको बताए । पछि अरु प्रहरी थपिएर १२ जनालाई नि य न्त्र णमा लगेको बताए । प्रहरीले निय न्त्र णमा लिए’पछि आफुहरु अब म र्ने भैयो भन्ने लागेको र अरु साथी बाँचे भन्ने लागेको बताएका उनीहरुले पछि साथीहरुको निधन भएको खबर’ले दुख लागेको बताए ।
गाउँलेले वेहुला र उसका ३ जना साथी खै भन्दै सोधेका थिए । उनीहरुले नवराज र ति साथीलाई लक्षित गरेर आ क्र म ण गरेको उनीहरुको भनाई छ । भिडियो हेर्नुहोस….
Prevजुम्ल्याहा नानीलाई बोक्दा शिशिरको आँखाभरी आँ’शु ! शिशिरलाई पर्यो अफ्ठेरो (भिडियो)
Nextसय वर्षीय महिला’ले पनि जितिन् कोरोना
मलेसिया, कतार , साउदी, दुबई लगाएत अन्य देशको आजको मुद्राको भाउ हेर्नुहोस्